जानकारी – Tu Khabar Online
Home / जानकारी
3 weeks ago	जानकारी 0
गर्भवती महिलाहरूको मुखबाट हामी सुन्ने गर्छौँ कि भखरै शिशु चल्यो वा शिशुले लात्तीले हान्यो l यदि अन्य व्यक्तिहरू पनि गर्भवती महिलाको पेटमा हात राख्ने हो भने उनीहरूले पनि अनुभव गर्न सक्छन् कि वास्तवमै शिशुले लात चलाइरहेका हुन्छन् l तर कहिल्यै तपाईँले सोच्नु भएको छ यो कुरा आखिर किन पेटमा रहेका …
काठमाडौं, ११ भदौ । प्रहरी हिरासतबाट रिहा भएका चर्चित टेलिभिजन कार्यक्रम प्रस्तोता रवि लामिछाने काठमाडौं आइपुगेका छन् । उनी सोमवार अदालतको आदेशवाट प्रहरी हिरसातवाट रिहा भएका थिए । अदालतले पाँच लाख धरौटी सहित लामिछानेलाई हिरासत मुक्त गरेको हो । हिरासतवाट मुक्त भएको तेस्रो दिन बुधबार सञ्चारकर्मी रवि लामिछाने काठमाडौं आइपुगेका …
एजेन्सी । ज्यातिषशास्त्रमा जम्मा १२ राशि उल्लेख छ। १२ राशिका अलग अलग ग्रह स्वामी रहेका हुन्छन्। यदी कुण्डलीमा ग्रह स्वामीको स्थिती शुभ नदेखिए व्यक्तिलाई कुनै पनि काममा बाधा तथा व्यवधान आउने गर्दछन्। जीवनमा दुख मात्र आउने गर्दछ। जीवन चलाउन कडा मेहनत गर्दा पनि प्रयाप्त पैसा हात नलाग्ने योग रहेको हुन्छ। …
एजेन्सी । वास्तुशास्त्रका अनुसार घरमा राखिने हरेक वस्तुको आ आफ्नै दिशा हुने गर्दछ। भनिन्छ, हाहीले जुन दिशामा सामान राख्छौँ, त्यसको प्रत्यक्ष असर हाम्रो जीवनमा समेत पर्ने गर्दछ। कुनै घरमा कुनै न कुनै कुरामा सबै विवाद हुने गर्दछ वा उस घरका सदस्य प्राय विरामी हुने गर्दछन् भने त्यसको कारण वास्तु दोष …
यस्ता युवतीसँग समबन्ध जाेडे जिवन नै बर्वाद
उही पुरानै उखानको याद आउँछ कि ‘एक हातले ताली बज्दैन’ । र मानिस कस्तो मान्छेको साथमा बाँकी जीवनको सुनौलो कल्पना गर्दैछ भन्ने कुराले उसलाई बेलाबेलै गम्भीर बनाउने गर्छ । प्रेम सम्बन्ध, वैवाहिक जीवन कसरी राम्रो बनाउने भन्ने बारे पनि खोज अनुसन्धान गरिरहेको हुन्छ मानिसले । एक अर्कालाई पूर्णरुपले जस्तो छ …
सपना देख्नुहुन्छ? शास्त्र अनुसार यस्ताे सपना देखे यस्ता फलहरू प्राप्त हुन्छ…..
4 weeks ago	जानकारी 0
सबै मानिसले सपना देख्छन् । बच्चा देखि वृद्ध सम्म सपना देख्ने हुन्छ । सपना एक सामान्य स्वभाविक प्रक्रिया हो । तर सपनाका विषयमा पनि विभिन्न थरी मत छन् । कतिपय सपनाविदहरुले सपनाले भविष्यको बारेमा सूचना दिने बताउँछन् । त्यस्ता सपना मध्ये कतिपय शुभ हुन्छन् भने कतिपय अशुभ । स्वप्न ज्योतिषका …
के तपाईं बच्चाको बाबुआमा हुनुहुन्छ। तपाईकै व्यवहारको कारण तपाईको बच्चामा शारिरीक र मानसिक विकासमा असर परेको हुनसक्छ । त्यसका लागि हरेक बाबुआमा सचेत हुन जरुरी छ। धेरै बाबुआमाले बच्चालाई स्कुल लैजाँदा स्कुलको ब्याग र टिफिन आफैले बोकिदिने चलन छ। बच्चा पाँच वर्षको भएपछि झोला बोक्ने काम तत्कालै छाड्नु पर्छ । …
सुत्ने समय यी ५ चिज सिरानीमुनी राख्नुस्, सुख शान्ति प्राप्त हुनेछ !
शास्त्र भन्छ दिनभरी हुने सुख शान्तिको सम्बन्ध रातसँग हुन्छ । रातीमा राम्रो निद्रा परेन भने शरीरको थकान मेटिँदैन । तपाइँलाई ताजा अनुभव रातभरीको विश्राम पछि मात्र हुन्छ । दिनभरीको सुख शान्तिका लागि यी ५ चीज सुत्ने समयमा सिरानी मुनी राख्नु राम्रो हुने शास्त्रमा उल्लेख छ । हनुमान चालिसा हरेक रात …
वैज्ञानिकको खुलासा : व्रत बस्दा उमेर बढ्ने, क्यान्सर र मधुमेह रोक लाग्ने संभावना कम हुन्छ
काठमाडौं। आधुनिक जीवनशैलीमा उपवास (व्रत) लाई लिएर दुई प्रकारका विचार छन्। कथित बुद्धिजिवी वर्ग यसलाई अन्ध श्रद्धाको संज्ञा दिन्छन् तर स्वास्थ्य प्रति सचेत हुनेहरु यसलाई शरीरकालागि राम्रो काम भएको बताउँछन्। तर सवै धर्ममा व्रतलाई ईश्वरसँग जोडेर हेर्ने गरिन्छ। यस्तो अवस्थामा व्रत भगवानसँग जाडिने माध्यम हो की वैज्ञानिक कारण पनि छ? …
August 5, 2019	जानकारी 0